Ukukhetha Ikhamera Efanele Yomzimba Ofanele | Izixazululo ze-OMG
Amakhamera agqokwa ngomzimba eza ngezinhlobo ezahlukahlukene, angagqokwa futhi afakwe ezingxenyeni ezahlukene zomzimba ezihlanganisa: ikhanda, ihlombe nesifuba. Kuba kubaluleke kakhulu ukukhetha uhlobo oluhle kakhulu lwekhamera yomzimba ehambelana nomsebenzi okufanele wenziwe. Kuhle futhi ukuqaphela ukuthi wonke amakhamera anezinto zawo nokuwa, amane nje abe ngumdlalo omuhle kakhulu kunoma yini okudingeka yenziwe. Emuva ezinsukwini lapho amakhamera we-dock aqala ukulethwa embuthweni, bekunezimo eziningi zokuphuma. Amaphoyisa ayengafuni ukuthi “mfowethu omkhulu” azulazule ehamba nawo, ebuka konke okwenzekayo futhi ezwa izingxoxo zawo. Ngokushesha emashumini amaningi eminyaka kamuva, abaphathi manje bacela ukuba nabo ezimotweni zabo. Baye babona isipiliyoni sendawo yonke nokuthi kukhulu kangakanani lapho izikhulu zidonswa futhi zibandakanyeke ezimweni. Ukwazi mayelana nokuthi kusiza kanjani izikhulu ekuboshweni ezigcina ziphumela ekukholweni, kuyilapho kuvimbela nezikhalazo ezibucayi zezakhamizi ezivele zinamagqubu ngamaphoyisa. Lapho amakhamera agqokwa ngomzimba ekugcineni engeniswa embuthweni, kwakukhona ukuziphindiselela kokuqala okuvela kuma-engele ahlukene. Iningi lesizathu belifana nelokuqala "komfowethu omkhulu" azizwe njengalapho amakhamera edokodo eziswa okokuqala embuthweni wamaphoyisa. Kepha ngokuqhubeka kwesikhathi yabekwa eceleni ngokushesha njengoba ucwaningo lukhombisa ukwamukelwa okusheshayo kwalolu hlelo, ngokushesha abaphathi bakubona kungubuchwepheshe obuhle obungabavikela kwizikhalazo zamanga-okuyinto eseyinto ejwayelekile.
Iqiniso manje ukuthi izikhulu eziningi zifuna ikhamera yomzimba ngokushesha okukhulu. Ngakho-ke sekubaluleke kakhulu ukuthi ube nezici ezithile zokubheka lapho ukhetha ikhamera yomzimba, noma ngabe uyenza njengenhlangano noma njengomuntu. Nazi izinto ezimbalwa okufanele uzibheke ngenkathi ukhetha:
Umbono: noma ikuphi ukubukwa kwekhamera ethatha ividiyo noma isithombe kusuka kubaluleke kakhulu, iphuzu lokubuka noma iyiphi ikhamera esetshenziswayo ithwebula isithombe kusuka kungenzeka ibe yinto eyodwa ebaluleke kakhulu yesixazululo esisha esigqokwa ngumzimba sabenzeli bomthetho . Noma ngubani osebenzisa ikhamera kufanele aqaphele kakhulu emkhakheni wokubuka lapho ukuqoshwa kwenziwa khona, lokhu kusiza orekhoda ukuthi azi mhlawumbe uma ukufakwa kwekhamera kusiza noma kungasizi i-footage ebanjiwe. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi ukuba nekhamera esifubeni, kungasho ukuthi uma nje isikhulu leso sesingenile esimweni esivusa inkimbinkimbi esihlanganisa ukulwa, ikhamera ingahle inyiselwe phansi okusho ukuthi izobamba kuphela isicoco sonyawo sesihloko. Indawo enhle yokubeka ikhamera endaweni ethile endaweni efanayo nomugqa wokubona komsebenzisi. Ezinye izindawo ezingabhekwa yilezi:
umphetho wekhola yebhola
paddle wendlebe yezibuko
Zonke lezi zindawo zenza umsebenzi omuhle kakhulu wokulingisa umugqa wokubona. Lokhu kubaluleke kakhulu futhi imiqondo eminingi kufanele ifakwe kulokhu.
Ukuqina nokwethenjwa: uzodinga ukuthi uzibuze ukuthi “luqine kangakanani lolu hlobo lobuchwephesha engilusebenzisayo?” ukuqina kudlala indima enkulu ikakhulukazi ekunqumeni ukuthi i-cam ingahlala isikhathi esingakanani. Kuzofanela kube nokulingana ekukhetheni kwakho omagagasi, njengoba ngesinye isikhathi ku-rugged kungahle kube nesisindo esengeziwe. Ukuba nesisindo somzimba esindayo kuzoba yinkinga enkulu, ukuba nesisindo kungenza ikhamera ingasetjenziswa ngoba ithumela umbono ongeyiyo kulowo oyigqokayo nababuyekezayo. Kunezibonelo eziningi zezingcezu eziqinile zamagiya ashiywe emakamelweni eqembu ngoba nje isisindo sawo asibekezeleleki futhi siyasinda. Ibhalansi ihlala iyisihluthulelo, uhlale ukhumbula ukuthi uzosebenzisa kanjani nokuthi ukugqoka kahle kanjani kuzoba nakho. Ngokujaha, ikhamera yomzimba esindayo ngeke ikwenze lutho ngoba izokunciphisa futhi ikwenze ukhathale ngokushesha okukhulu. Kubalulekile ukuthi ukwazi ukuthembela kahle kwikhamera yakho ukuze ungarekhodi konke okubonayo kuphela futhi futhi ungakuphazamisi noma ukuwehlise ijubane, kufanele kube sengathi ayikho ngisho nalapho ikhona.
Ubumnandi nosayizi: Ubukhulu bekhamera buyinto ebaluleke kakhulu lapho ukhetha amakhamera, ukuba nezincane kakhulu kungazuzisa kakhulu kepha ukuba kukhulu akukhona. Njengoba sazi maqondana nokududuzeka nosayizi wedivaysi, kulula kakhulu. Kubalulekile ukuthi ulwele ukulinganisela phakathi kwesisindo esiphelele, usayizi wephakeji nokuthi uqina kangakanani. Iphakheji isho ukuthi yonke isethi ikhamera yomzimba kumele ihambisane nayo ukuze isebenze. Lokhu kungukuphelele kwephakeji yonke engabandakanya cishe izintambo ezimbili, isethi yebhethri futhi mhlawumbe nomphathi / icala. Kubalulekile ukuthi uqaphele ngokukhetha okusekelwe kwesisindo, lokhu ukugwema idivaysi ephuka kalula.
Ukulula ukusetshenziswa: kungokwemvelo ukuthi wonke umuntu afune idivaysi okulula ukuyivula futhi icishe nayo, okusho ukuthi ayikho ingxenye yobuchwepheshe eyaziswa ngempela. Kungaba nzima impela lapho amadoda amadala edinga ukuqhuba izinqubo ezimbalwa ukwenza ukuthi noma izintuli zivulwe. Ngaphandle kokusebenzisa kalula insimu, kubalulekile ukwazi ukusebenzisa nalapho iphoyisa libuya ekuhambeni. Lesi sikhulu kulindeleke ukuthi sichithe isikhathi esincane ehhovisi nesikhathi esithe xaxa emgwaqweni, ukuba nobuchwepheshe obuncane obuyinkimbinkimbi empeleni kungabenza benze okuphambene nalokho okudingekayo. Ngalokhu kufanele kuqashelwe ukuthi isikhathi esithe xaxa futhi esinzima inqubo ukulanda amavidiyo, ukulebhelisha, ukuphatha nokuwagcina endaweni ephakathi nendawo, khona-ke lokhu kungasho ukuthi bazoba nesikhathi esincane kakhulu sayo yonke enye into.
Ukulawulwa kokuphela kwedatha: Leli gama lidingida izingqinamba njengokuthi kulula futhi kulula ukuphatha kanjani ikhamera nokusebenza kwayo ukulanda, ukugcina, ukwaba kanye nokubuyisa idatha yenqwaba. Yilapho idatha igcinwe isikhathi eside, kepha kubaluleke kakhulu. Lokhu akubalulekile kuphela kubaphathi kepha nakulabo abasohlelweni lwezobulungiswa bobugebengu futhi ngemuva kokuba kubaluleke kakhulu bayakwazi ukuqonda umqondo wento yonke ngencazelo encane nje. Kubalulekile ukuthi noma ngasiphi isikhathi lapho ividiyo iceliwe, iyatholakala futhi lokhu akuwona umsebenzi wesikhulu nje ukuthi uqhubeke ujikeleze idolobha ukuhambisa nokuhlela nokulonga. Kufanele kube nomnyango ophethe ukukhohliswa kwedatha.
Intengo: izindleko zanoma yikuphi ubuchwepheshe obuthengwayo kumele zibe ngesabelomali ziphephe, kubaluleke kakhulu ukuthi lo msebenzi awubizi kakhulu. Intengo ingaba yinkimbinkimbi kakhulu kunalokho okucatshangelwe uqobo njengoba isidingo sokuvuselelwa esikhathini esizayo, ukushintshwa kwengxenye engamboziwe ngewaranti noma izindleko zokulungiswa kungahlala kukhuphuka. Kubalulekile futhi ukuqaphela ukuthi kwamanye amadivaysi angahlanganisi izinketho zesitoreji, imali eningi izosetshenziselwa ukuthenga isitoreji kanye namaseva okugcina amafu. Kungadingeka futhi ukuthi kuqashwe abasebenzi abaphethe umthwalo wabo okuwukuphela kwabo ukuphatha imininingwane. Lezi yizindawo lapho isabelomali nezindleko zibuye zidlulele ngaphakathi.
Inketho ekhuphukayo eminingi: izikhulu ezihamba ngokugibela zidinga izinketho eziningi ezitholakala ikakhulukazi ekhuphukeni, kufanele kube nenketho yokukhetha noma yini esebenza kahle kuwe; kungaba: izibuko, ihlombe, umzimba, isigqoko noma ikholaji. Ukuvumelana nezimo kwezinketho ezitholakalayo kuyinzuzo enkulu ebaluleke kakhulu.
Ukwesekwa kwamakhasimende: ikhamera egqokwa ngumzimba, ingahle ihehe futhi ihehe kodwa namanje iyaqhekeka. Amaphutha wokunameka ayalungiswa kokutholakala okusha, kwesinye isikhathi noma kwesinye ungadinga ukuthi ukhulume nokusekelwa kobuchwepheshe ngokuqondene nenkinga okungenzeka ukuthi ubhekene nayo ngedivayisi yakho. Ezimweni ezinje, kuhle kakhulu ukuthi ube nomuntu ovela enkampanini ongakhuluma naye futhi ongakuphendula ngokushesha. Njengoba ngokusobala ikhamera egqokwa umzimba iyithuluzi lokuphepha nenhloso yobufakazi, uzofuna izimpendulo zale mibuzo eza ngokushesha okukhulu. Lokhu kuyinto ebaluleke kakhulu ekukhetheni njengoba izinkinga zobuchwepheshe zizokwenzeka, kubalulekile ukuthi uchwepheshe alungele ukuhambela ukubhekana nazo ngendlela yesikhathi esifanele.
Ukuthathwa Kwangaphambi Komcimbi: kwesinye isikhathi umcimbi ungenzeka ngokushesha okungaka ngaphambi kokuba ikhamera ivulwe, kwenziwa ezinye izinto ezibaluleke kakhulu. Lokhu kungafaka amacala afana nokudubula iphoyisa esifubeni noma mhlawumbe ukuzikhahlela ebusweni ngaphambi kokuligijimisa. Kwamukelwa emhlabeni wonke ukuthi lapho amandla edingeka ukubamba, kumele asetshenziswe. Kwesinye isikhathi kufanele uthinte ingxenye yomcimbi obungayilindelanga. Ngokuvamile zenzeka ngaphambi kokuthi ushaye ngisho inkinobho yokuqopha, lezi yizizathu ezenza ukuthi inkinobho yokurekhoda ibaluleke kakhulu.
Ngenkathi ubheka zonke lezi zinto ezibalulekile futhi uzikhumbule, ukukhetha ikhamera egqoke kahle umsebenzi kuba lula.
Ukukhetha Ikhamera Efanele Yomzimba Ofanele igcine ukuguqulwa: Disemba 3rd, 2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-3564 Ukubuka kwe-2 Namuhla